Ebuno အသင်း ၀ င်ခြင်းအတွက်စည်းကမ်းချက်များ
သင်၏ privacy ကိုဂရုစိုက်ပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စီမံပုံနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးလိုသနည်း။
သင်၏အကောင့်ကို Ebuno တွင်ဖန်တီးရန်နှင့်စီမံရန်၊
လက်ဆောင်ကတ်ပြားနှင့် PayPal ပိုက်ဆံအတွက်ရမှတ်များကိုထုတ်ယူခြင်းကိုကြီးကြပ်ရန်၊
အကြံဥာဏ်များကိုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စီမံပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်သင်ဖတ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းများရှိပါက၊ သို့မဟုတ်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေအရသင်၏အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ + 46 (0) 73 143 8750 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတိုက်လိပ်စာက Drottvägen 5, 18264 Djursholm, ဆွီဒင်.
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မည်သည့်အခွင့်အရေးများရှိသနည်း။ ၃
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စီမံဆောင်ရွက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ၄
အကယ်၍ သင်သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး Ebuno အသုံးပြုသူဖြစ်လာပါက ၄
သင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဂိမ်းများတွင်သင်ပါ ၀ င်ပါက ၅
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းများတွင်အရေးကြီးသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (ဥပမာသင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်) ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေးမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်မျှဝေထားသောဒေတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည် သဘောတူ .
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့လိုပါကရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဥပမာ - အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်။ သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် -“ စာချုပ်များကိုလိုက်နာခြင်း” နှင့်“ တရားဝင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ” နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချက်အလက်များသည်ဘယ်သောအခါမျှထိခိုက်လွယ်သောအချက်အလက်များမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ပေးသောစစ်တမ်းများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများတွင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတွင်သင်ပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းအင်းဥပဒေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ပါ နှင့်ဖြစ်နိုင်သောဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်.
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အား Ebuno မှအဓိကအားဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ သို့သော်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ IT နှင့်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်သောအိုင်တီ - စစ်ဆင်ရေးများကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှပါမည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ IT ပေးသွင်းသူများနှင့်သာကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အရကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသောသူတို့၏တာ ၀ န်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ပါက။
သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စစ်တမ်းများကိုသင့်အားပေးရန်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှပေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ဘယ်သူစစ်တမ်းများပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ကုမ္ပဏီများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်ပါ ၀ င်မည့်သူများကိုရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိကြားခံပါတီများအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်
သင်၏ PayPal မှငွေများကိုသင်ထုတ်ယူလိုပါကသင်၏ငွေပေးချေမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို PayPal နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ PayPal သည်သင်၏အချက်အလက်များကို controller အဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သာမကကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာများသာမကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို EU / EEA အတွင်း၌သာအဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို EU / EEA ပြင်ပတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစစ်တမ်းများနှင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည့်မိတ်ဖက်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအီးယူ / အီးယူပြင်ပတွင်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို EU / EEA ပြင်ပသို့ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်မရှင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်၊ စံစာချုပ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ် Privacy Shield တစ်ခုခုပေါ်တွင်အခြေပြုသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မည်သည့်အခွင့်အရေးများရှိသနည်း။
သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေအရအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင်သည်အောက်ဖော်ပြပါအခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဤအခွင့်အရေးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုအသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ၏အစတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်ကရပိုင်ခွင့်ရှိသည် အတည်ပြုခြင်း ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို process ရှိမရှိအပေါ်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပါကသင်ရရှိရန်အခွင့်အရေးလည်းရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် နှင့် တစ် ဦး မိတ္တူကိုလက်ခံရရှိရန် သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏။
မင်းမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် တိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုတညျ့ နှင့်ရှိသည် မပြည့်စုံသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြီးစီးခဲ့သည်.
ဖျက်ပိုင်ခွင့် (“ မေ့လျော့ပိုင်ခွင့်”) နှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်း
သင်၌အခွင့်အရေးရှိသည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ပါ အချို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကောက်ယူစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားပေါ် အခြေခံ၍ မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်နှင့်သင်တို့၏ကန့်ကွက်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့်အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါဥပမာဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုမှလက်ျာဘက်), ငါတို့ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်မဟုတ်ကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လည်းတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ် သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသင်မေးခွန်းထုတ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအပေါ် မူတည်၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်ကွက်သောအခါ၊ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောနေရာတွင်ရှိလျှင်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကိုသင်ဆန့်ကျင်။ လိုချင်သည့်အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို။
အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးထားသည့်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (သင့်အကြောင်း) ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးစက်ဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်သင့်ကိုပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အခြားထိန်းချုပ်သူသို့လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။
သင်၏တရားဝင်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်အားသင်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် "တရားဝင်အကျိုးစီးပွား"။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြောင်းအလဲကိုကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေပြုသည့်အခြေအနေများကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှတမှုအကျိုးစီးပွားအကဲဖြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်၊ သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်ကန့်ကွက်လျှင်ပင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏အကျိုးစီးပွားထက်ပိုသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ခိုင်လုံသောတရားဝင်အကြောင်းပြချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်တရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်ဆိုပါစို့။
သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပေးထားသောခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်သင်ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီသင်၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ် မူတည်၍ အပြောင်းအလဲ၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၌အခွင့်အရေးရှိသည် တိုင်ကြားချက်ကိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့တင်ပြရမည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ။
ထိုကဲ့သို့သောတိုင်ကြားချက်သည်သင်နေထိုင်သော၊ အလုပ်လုပ်နေသည့်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည့် EU / EEA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရှိအာဏာပိုင်များထံတင်သွင်းနိုင်သည်။ ဆွီဒင်တွင်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်သည် ဆွီဒင်ဒေတာကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်.
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စီမံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်လုပ်ဆောင်သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်၊ မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်မျှကြာစွာဆောင်ရွက်သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
သင်အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပြီး Ebuno အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်
သင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုအပါအဝင်သင့်အကောင့်ကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုရန်သင့်အားဖန်တီးရန်နှင့် enable လုပ်ရန်
အကောင့်တစ်ခုရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - သင်၏ချိန်ညှိချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်သင်၏စစ်တမ်းကောက်ယူမှုသမိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်
သင်၏အမှတ်ပေါ်အခြေခံပြီးအခြား Ebuno အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတွက်ချက်ရန်
မည်သည့်စာချုပ်မဆိုအတွက်သင်၏လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏အကောင့်အားစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအချက်အလက်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အား Ebuno သို့မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးပို့ခဲ့သည့်အကြောင်းနှင့်သင့်အားအပိုအချက်များနှင့်ဆုလာဘ်ရရှိရန်သူတို့စုဆောင်းထားသောအချက်များမည်မျှရှိသည်ကိုခြေရာခံရန်
သင်၏သူငယ်ချင်းများကို Ebuno သို့စုဆောင်းရန်အပိုအချက်များနှင့်သင့်အားဆုချရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်စိတ်ဝင်စားမှု။
အကယ်၍ သင်သည်ရည်ညွှန်းထားသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်လျှင်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကန်ထရိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်မည်။ အထက်တွင်ကြည့်ပါ။
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Ebuno တွင်သင်ဖျက်လိုသည့်အချိန်အထိ (သို့) ၃ နှစ်မလှုပ်မရှားမလုပ်မချင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်.
သင်၏အိမ်ထောင်စု၊ ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်၊ ကား၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများ၊ ဝါသနာများနှင့်အကျိုးစီးပွားများ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း၊ မီဒီယာ၊
သင်၏လူမျိုး၊ ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအကျင့်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နောက်ဆုံးကလေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်မည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင် "ဒီအကြောင်းကိုမကြေငြာချင်ဘူး" သို့သင်ပေးခဲ့သောအဖြေအချို့ကိုလည်းသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ရန်မရွေးချယ်မှီ၊ သင်၏ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်းမလှုပ်မရှားဖြစ်မှီ (သို့) သင်၏အဖြေများအား“ ဤအကြောင်းအရာကိုငါမကြေငြာရန်ပိုနှစ်သက်သည်” သည်အထိသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါမည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင်သင်၏အထိခိုက်မခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းသိမ်းဆည်းတော့မည်မဟုတ်ပါ
သင်တင်ပြသောစစ်တမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဂိမ်းများတွင်ပါ ၀ င်ပါက
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းမပြီးမချင်းကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည့်အခါသို့မဟုတ်သင်၏အဖြေကို“ ငါမကြေငြာချင်ဘူး” ဆိုသည့်အခါချက်ချင်းသိမ်းဆည်းခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်စစ်တမ်းများကိုသင့်အားပေးရန်
သင်ပါ ၀ င်သောစစ်တမ်းတစ်ခုစီအတွက်အမှတ်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့စစ်တမ်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားအခွင့်အရေးပေးသည်ကိုသတိပြုပါ၊ သို့သော်အမှန်တကယ်စစ်တမ်းများကိုတတိယပါတီများကစီမံသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင်သင်၏အမည်သို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ရွေးချယ်ပါကစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အဖြေများကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ချည်နှောင်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ကုမ္ပဏီသည်ထိန်းချုပ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသူတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံကိုပိုမိုသိလိုပါကသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်စစ်တမ်းများကိုသင့်အားပေးရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွား။
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ရန်မရွေးချယ်မှီ (သို့) ၃ နှစ်တာ ၀ န်မထမ်းဆောင်သေးမှီအထိသိမ်းထားပါမည်.
သင်၏ Ebubo တွင်သင်၏အသင်း ၀ င်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာချုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လက်ဆောင်ကဒ်ပြားအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။
သင်ရရှိသောအချက်များကို PayPal ငွေသို့ပြောင်းလဲရန်
သင် PayPal ဆုလာဘ်ပေးပို့ဖို့
သင်၏အချက်များကို PayPal ငွေသို့ပြောင်းလဲရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို PayPal နှင့်မျှဝေရန်သတိပြုပါ။ သင်၏ဒေတာများကို PayPal မည်သို့လည်ပတ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက PayPal ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ Ebubo တွင်သင်၏အသင်း ၀ င်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာချုပ်အားကျွန်ုပ်တို့အားပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် PayPal ၏ငွေများအဖြစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ရန်စစ်တမ်းများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအတွက်ငွေလွှဲနိုင်သည်။
သင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့် (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) တွင်သင်နှင့်စကားပြောဆိုရန်၊ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါက
သင်၏ပရိုဖိုင်မှသတင်းအချက်အလက် (အသုံးပြုသူအမည်နှင့်သင်၏အကောင့်အတွက်သင်ရွေးချယ်လိုက်သောမည်သည့်ရုပ်ပုံမဆို) မှအချက်အလက်များ
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်အားဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုပါကသို့မဟုတ်သင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုသင်ဖျက်ပစ်ပါကဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားအချက်အလက်များကိုလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထပ်မံအသိပေးခြင်းမပြုလုပ်မှီကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
သိုလှောင်ကာလဖြေ။ ။ ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ၂ နှစ်လောက်သိမ်းထားမယ် ပြီးနောက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စဖြေရှင်းခဲ့သည်။
သင်၏တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်
သိုလှောင်သည့်ကာလ: သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ၂ နှစ်တာသိမ်းထားပါမည်။
သင်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ထားသောဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ၊ ဥပမာအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် / သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်တရား ၀ င်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အပြောင်းအလဲသည်လိုအပ်သည်။
သိုလှောင်သည့်ကာလ: ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မတိုင်ကြားမီ၊ လက်ျာဘက်ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှု၏ကြာချိန်အထိသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
စာရင်းအင်းနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဥပဒေများဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ကိုက်ညီရန်အပြောင်းအလဲသည်လိုအပ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအချို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏“ တရားဝင်အကျိုးစီးပွား” အပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အကျိုးစီးပွားမျှတမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်သင်၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများထက်သာလွန်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားမျှတမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ၏အစတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကို ၂၀၂၀-၂၀၁၁ တွင် Ebuno AB မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်.
CINT & Ebuno နှင့်ပတ်သက်
အဖွဲ့ ၀ င်၊ စစ်တမ်းပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းအတွက်စည်းကမ်းချက်များ
ထိရောက်သောနေ့ရက် - 28 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည် - 28 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
"တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ” (က) စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သည်၊ (ခ) အခြားသုတေသနအစီအစဉ်။ (ဂ) ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်းတစ်ကြိမ်၊ (d) လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ (၁၂) လအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်သို့မဟုတ်အသင်း ၀ င်အချက်အလက်ကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
"စျေးကွက်သုတေသနခြေရာခံခြင်းဝန်ဆောင်မှု"အသုံးပြုသူမှလက်ခံသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူ၏အွန်လိုင်းအပြုအမူ၊ ဥပမာအသုံးပြုသူမှ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသူနှင့်ထိတွေ့သည့်အွန်လိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကဲ့သို့သောကြော်ငြာခြေရာခံခြင်းသုတေသနအပါအ ၀ င်။
"သက်ဆိုင်ဥပဒေ"သက်ဆိုင်အမျိုးသားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသခံဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
"ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုရည်ညွှန်းသည်။
"အကြောင်းအရာ” ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံနေရာ၊ မိတ်ဖက်ဆိုသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"panel ကစျေးကွက်သုတေသနစစ်တမ်းများ၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်များ (သို့) အခြားစျေးကွက်သုတေသနအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၌ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ဖိတ်ကြားရန်သဘောတူထားသူတစ် ဦး ချင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
"အဖွဲ့ ၀ င်"ဟုအဆိုပါ Panel ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"panel ပိုင်ရှင်” သင်ကအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည့် Panel ၏ပိုင်ရှင်နှင့် Panel ဆိုဒ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"Panel ဆိုဒ်"လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီသည်အသင်း ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်များအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။
"အဖော်"Panel ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားမိတ်ဖက်များအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"မိတ်ဖက်ဆိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှလုပ်ကိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။
"ပါဝင်သူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်တစ် ဦး မှစစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ညွှန်ကြားသည့်အဖွဲ့ ၀ င်မဟုတ်သူတစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာများ"ဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်လူတစ် ဦး နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည် ("ဒေတာကိုအကြောင်းအရာ"); အထူးသဖြင့်သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ အထူးသဖြင့်တစ် ဦး တည်းသော်လည်းကောင်းသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖြစ်စေပေါင်းစပ်ဖော်ပြသည့်အရာအားရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတွင်အမည်၊ လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်၊ မွေးနေ့နှင့်မွေးနေ့၊ မိခင်၏သမီးငယ်နာမည်၊ ဇီဝရုပ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ , ဘဏ္financialာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်။ (မှတ်ချက် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသို့မဟုတ် PII ဟုလည်းရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ )
"ကန့်သတ်အကြောင်းအရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် / သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်၊ ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် / သို့မဟုတ်အဖွဲ့ပိုင်ရှင်၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၊ ပါတနာနှင့် / သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရသူများကိုရည်ညွှန်းသည်။
"ဝန်ဆောင်မှု(က) အဖွဲ့ ၀ င်သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူအနေဖြင့် (က) အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ (ခ) အခြားသုတေသနအစီအစဉ်၊ (ဂ) ကျွန်ုပ်တို့မှပေးသောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်သုတေသနခြေရာကောက်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သင်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။
"တင်ပြချက်များအကြံပြုချက်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်သည်အဖွဲ့တစ်ခုတွင်သင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားသုတေသနအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတုံ့ပြန်သည့်အခါသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်သင်တင်ပြသောသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
"စစ်တမ်းပိုင်ရှင်"ပုံမှန်အားဖြင့်တစ် ဦး လိုင်းဖြစ်သောစစ်တမ်း၏ပိုင်ရှင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"တတိယပါတီ Website များ"တတိယပါတီများကထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် operated ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
"အသုံးပြုသူ"သင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်တစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
"အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ” သင်အသုံးပြုသောအကြောင်းအရာများ၊ ပစ္စည်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံများဖြစ်သောကြော်ငြာခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်သင်အသုံးပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသောအခါတင်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။
"သငျသညျ","သင်ကိုယ်တိုင်","သင့်ရဲ့"နှင့်"ဥစ္စာတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်သင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
"We","Us","ကျွန်တော်တို့၏"နှင့်"ခါးပတ်"ဆွီဒင် entity Cint AB reg ကိုရည်ညွှန်းသည်။ မဟုတ်ဘူး 556559-8769 ။
၁ ။ သဘောတူညီချက်
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသင်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည့် Panel ပိုင်ရှင်နှင့်သဘောတူညီမှုအပြင်စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သောသီးခြားစည်းကမ်းချက်များအပြင်မည်သည့်သဘောတူညီချက်နှင့်မဆိုလျှောက်ထားပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်သင်နှင့် Panel ပိုင်ရှင်အကြားသဘောတူညီမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားသုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အတွက်ပါ ၀ င်ရန်သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ Panel ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်လိုင်းမှပေးသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများနှင့်လည်းကောင်းပconflictိပက္ခဖြစ်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအခြားဝေါဟာရများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်သတ်မှတ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုရဟူသောအချက်ဖြစ်သည်
2 ။ နိဒါန်း
ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစစ်တမ်းများ၊ အဖွဲ့ (သို့) အခြားသုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများအားသင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်ယေဘူယျစည်းကမ်းချက်များကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
မြေတိုင်းပိုင်ရှင်နှင့်အဖွဲ့ပိုင်ရှင်တို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲပြီး Panel ပိုင်ရှင်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ ၀ င်များအတွက်အခွင့်အရေးများ ပေး၍၊ စစ်တမ်းများ၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်များနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ပလက်ဖောင်းပေးသူလည်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်လုံးများကိုလည်းစီမံနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမက်လုံးပေးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
၃။ အသင်း ၀ င်ခြင်းအရည်အချင်းပြည့်မှီမှု
အနိမ့်ဆုံးအသက်လိုအပ်ချက်နှင့်ပထ ၀ ီအနေအထားတည်နေရာလိုအပ်ချက်များအပါအ ၀ င်အသင်း ၀ င်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောလူပုဂ္ဂိုလ်များအားယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်ကိုဖွင့်သည်။ Panel အဖွဲ့ဝင်များအတွက်လိုအပ်ချက်များသီးခြား Panel ကိုအားဖြင့်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ၎င်း, Panel ကိုပိုင်ရှင်ကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သင်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ရန်သဘောတူခြင်းအားဖြင့်၊ သင်အဖွဲ့ ၀ င်အဖြစ်လျှောက်ထားရန်သင် Panel Panel ပိုင်ရှင်ထံမှအခြား Panel ပိုင်ရှင်များထံမှနှင့်စစ်တမ်းများ၊ သုတေသနအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားချက်များလက်ခံရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအဖွဲ့ ၀ င်မှ ၀ င်ခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါအပိုင်း ၁၂“ ဖယ်ထုတ်ခြင်းမူဝါဒ” ကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့တစ်ခုစီအတွင်းရှိထူးခြားသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုစီအတွက်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ကိုသာခွင့်ပြုသည်။
အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ရန်၊ သင်သည်အဖွဲ့ ၀ င်ဆိုက်တစ်ခုတွင်သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးရမည်။ သင်ဖြည့်စွက်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်မှန်ကန်ရမည်၊ ပြည့်စုံရမည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုသင်ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလျှင်၊ သင်စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားသုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်မမှန်၊ မှန်ကန်မှုနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုသံသယဝင်စရာအကြောင်းရှိသည်။
အဖွဲ့ ၀ င်သည်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ ၀ င်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သောသူမှသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်နှင့်စကားဝှက်ကိုမဆိုလျှို့ဝှက်ထားရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏အသင်း ၀ င်အကောင့်၏ခွင့်ပြုချက်ရသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင်၌တာဝန်ရှိသည်။
၅။ စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အခြေအနေ
သင်တစ် ဦး စစ်တမ်း, အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြားဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်, မြေတိုင်း site တစ်ခုသို့မဟုတ် panel ကို site ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်ကဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်နှင့်အခြားသင့်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ။ သင်နှင့် Panel ပိုင်ရှင်အကြားမည်သည့်သဘောတူညီချက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသို့မဟုတ်ပါတနာမှအသုံးပြုသောစည်းမျဉ်းများအပါအ ၀ င်ပါ ၀ င်ခြင်း။
စစ်တမ်းတစ်ခု၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သော၊ မှန်ကန်သောနှင့်ပြည့်စုံသောအချက်အလက်များကိုပေးရန်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်မမှန်၊ မှန်ကန်၊ ပြည့်စုံသည်ဟုသံသယဝင်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိလျှင်၊ သင်သည်စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်မည်သည့်မက်လုံးကိုမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် panel ပိုင်ရှင်သည်သင်၏စစ်တမ်းများနှင့်အခြားသုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သည့်အတွက်သင်၏အသင်း ၀ င်မှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသန ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မည်သူမဆို ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အချိန်မရွေးငြင်းဆန်နိုင်သည်။
သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပါဝင်ခြင်းရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ မည်သည့်အေဂျင်စီ၊ မိတ်ဖက်၊ ဖက်စပ်၊ ၀ န်ထမ်း - အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် franchisor-franchisee ကြားဆက်ဆံရေးကိုဤသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်ရည်ရွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မဖန်တီးထားပါ။
(က) ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံအရ၊ အရန်ဖက်ဆိုဒ်၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စနစ်ရင်းမြစ်များ၊ အကောင့်များ၊ သို့မဟုတ်မြေတိုင်းစစ်တမ်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်သောသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များ၊
(ခ) ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များသို့မဟုတ်ပါဝင်မှုများကိုဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေရန်ပင့်ကူများ၊ စက်ရုပ်များသို့မဟုတ်အခြားအလိုအလျောက်အချက်အလက်ရှာဖွေသည့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်စစ်တမ်း၏ရလဒ်ကိုအခြားနည်းများဖြင့်အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အပါအဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်၊ သို့သော်မကန့်သတ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံနေရာ၊ ပါတနာဆိုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်တစ် ဦး ချင်း၏အသုံးပြုမှုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊
()) ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဒေတာများသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသော၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေသောကုဒ်၊ ဖိုင် (သို့) သတင်းအချက်အလက်များကိုစပိုင်ဝဲ၊
(င) ၀ န်ဆောင်မှုများအခြားအသုံးပြုသူများ၏မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမဆိုစုဆောင်းရမည်။
(စ) ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ကြော်ငြာများကဲ့သို့မလိုလားသောအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ခြင်း၊
(ဆ) အဖွဲ့ ၀ င်အကောင့်တစ်ခု (၁) ခုထက် ပို၍ ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဇ) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအခြားအသုံးပြုသူအကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားခြင်း၊ သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအထောက်အထားနှင့်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်၊
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်းလေ့လာမှု၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံနေရာတစ်ခု၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်တမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆိုဒ်သို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းသည်။ အထွေထွေလက်လှမ်းမီမှု၊
()) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဆိုက်တစ်ခု၏အပိုင်း (များ) ကိုရေးဆွဲပြီးအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မီဒီယာတွင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်မြေတိုင်းဆိုက်၊ Panel ဆိုက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဆိုဒ်၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊
(ဌ) ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံနေရာ၊ မိတ်ဖက်ဆိုဒ်သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ရန်၊
()) မည်သည့်ပုပ်မှုမျိုးမဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မြေတိုင်းနေရာ၊ панဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆိုဒ်များတွင်ကြမ်းတမ်းသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစကားများ၊
(ဏ) စစ်တမ်းကောက်ခြင်းမှတဆင့်မြန်ဆန်ခြင်း၊ တူညီသောစစ်တမ်းကိုတစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ယူခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်း၊ မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်မမှန်မကန်စစ်တမ်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်း၊ သို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်မက်လုံးပေးမှုများမှတစ်ဆင့်၊ သင်၏အွန်လိုင်းအပြုအမူကိုအထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်အထင်အရှားဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများနှင့်ကြော်ငြာခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်လိမ်လည်လှည့်စားခြင်း၊
(စ) ၀ န်ဆောင်မှု၏မည်သည့်ရှုထောင့်ကိုမဆိုအင်ဂျင်နီယာအားပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုထုတ်ဖေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကခွင့်ပြုထားသည်မှအပမည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၊ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရ၊
(q) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ မြေတိုင်း၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေပုံနေရာ၊ မိတ်ဖက်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ပြစ်မှုသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ရပ်များတွင်မဆိုပါဝင်ရမည်။
(r) ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်ဖျက်ခြင်းအားအသုံးပြုခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်ကျူးလွန်ရန် (Panel) အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပါဝင်သူများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအပါအ ၀ င်မည်သူမဆိုအားတိုက်တွန်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်း။
စာတမ်း၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များ၊ တေးသီချင်းများနှင့်အသံများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေကွက်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဆိုက်နှင့်ယင်းတို့၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အစီအစဉ်များသည်မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်လျှောက်ထားခွင့်အပါအ ၀ င်၊ ၎င်းတို့မှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီးရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ ကျွန်ုပ်တို့မှကိုင်ဆောင်ထားခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ချထားပေးခြင်း၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်၊ Panel ပိုင်ရှင်၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများအားပိုင်ရှင် (သို့) ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင့်အားကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ သင်သည်ကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာများအတွက်မည်သည့်အခွင့်အရေးမျှသင့်ကိုခွင့်မပြုထားပါ။ အသုံးပြုရန်၊ ထုတ်ဖေါ်ရန်၊ ကူးယူရန်၊ ကူးယူရန်၊ ဖြန့်ဝေရန် (သို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ လူမှုမီဒီယာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်သို့တင်ပို့ရန်အပါအ ၀ င်) ကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာ၏အကြောင်းအရာကိုသင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်ထံသို့ပြန်သွားပါကဥပဒေရေးရာအရေးယူခြင်းခံရနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးလိုပါသည်။ သင်ကတရားဝင်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ရာတွင်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောအကြောင်းအရာကိုသင်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသောစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ (ထုတ်ဖော်ဖော်ပြခြင်းအပါအ ၀ င်) ထုတ်ဖော်မှုများအတွက်တတိယပါတီတောင်းဆိုမှုများအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝပူးပေါင်းမည်ကိုသင်ဤအားဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသန၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်များ၊ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ မြေတိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၊ အဖွဲ့ ၀ င်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဆိုဒ်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့်သာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အခွင့်အရေး။
9 ။ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ
သငျသညျအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအားလုံးကိုတာဝန်ရှိသည်။ သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်တတိယပါတီ၏ခွင့်ပြုချက်၊ သဘောတူခွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လည်းသင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများအပါအ ၀ င်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်၏သုံးစွဲသူပါဝင်မှုသည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့ပိုင်ရှင်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပါအဝင်တတိယပါတီများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်၊ သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် / သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်များကိုသင်မရရှိပါကအသုံးပြုသူပါဝင်မှုတွင်အသံ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်သင် မှလွဲ၍ မည်သူမဆို၏ပုံသဏ္ဌာန်အပါအ ၀ င်တတိယပါတီ၏မူပိုင်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပါ ၀ င်ခြင်းမရှိစေရ။ သင်၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုအတွက်တတိယပါတီများလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများသည်အသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်လျော်ကြေးကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားစုဆောင်းရန်အသုံးပြုခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုခြင်း (ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်) အသုံးပြုသူပါဝင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်ဤအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရ၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝြေခင်း၊ ထုတ်ဝြေခင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုခြင်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုရန်။ အတိအလင်းသဘောတူထားသည့်နေရာ မှလွဲ၍ သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်မည်သည့်လျော်ကြေးကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုသည်မည်သည့်တတိယပါတီ၏မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဆိုချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်၌သာတာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် - (က) ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကိုဖျက်ရန်၊ ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ (ခ) ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် (ဂ) ကြမ်းတမ်းစွာပြုခြင်း၊
၁၀။ Point-based Incentive Programs ပေါ်လစီ
အကယ်၍ သင်သည်စစ်တမ်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်ပြီးအခြားသုတေသနအစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်များမှရရှိသောအမျိုးမျိုးသောဆုများသို့မဟုတ်ငွေသားများအတွက်ရနိုင်သည့်ရမှတ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ သင်ရမှတ်များရရန်သင်တစ်စုံတစ်ရာကို ၀ ယ်စရာမလိုပါ။ သင်ရရှိခဲ့သည့်ရမှတ်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်ပြီးအခြားသူတို့ကိုမည်သူ့ကိုမျှလွှဲပြောင်း။ မရပါ။ သင်၏အကောင့်သည်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာပြီးနောက် ၂၄ လ (၂၄) လအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်မရွေးသောအချက်များသို့မဟုတ်မက်လုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့မှရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
စစ်တမ်းတစ်ခု၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအစတွင်သင်ရရှိနိုင်သောရမှတ်များအကြောင်းကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ပေးသောသို့မဟုတ်ရွေးနှုတ်သောအချက်များသို့မဟုတ်မက်လုံးများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောအခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်တာဝန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတာ ၀ န်ယူမှုသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ယူမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ စည်းကမ်းချက်များကိုသင်ချိုးဖောက်ပါကသင်ရရှိခဲ့သောရမှတ်များသို့မဟုတ်မက်လုံးများအားလုံးဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ သင်ရရှိသည့်ရမှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားမည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။
အဖွဲ့ ၀ င်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အသင်း ၀ င်မှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမွမ်းမံရန်သဘောတူသည်။ အဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်သည် ၄ ​​င်း၏အသင်း ၀ င်ပရိုဖိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကို (က) သူကိုယ်တိုင်အဖွဲ့ ၀ င်အကောင့်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ (ခ) သက်ဆိုင်ရာ Panel အတွက်သင့်လျော်သော Panel Member ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်း။
အဖွဲ့ ၀ င်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံး (စစ်တမ်းဖိတ်ကြားချက်များ၊ သတင်းလွှာများသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးများအပါအ ၀ င်) ကို (သို့) သက်ဆိုင်သော Panel Site သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သည့်ဆိုဒ်များတွင်ပါရှိသောသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောပယ်ဖျက်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းမပြုရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ ငါတို့ထံမှအီးမေးလ်တစောင်လက်ခံရရှိသည်။ (ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်း ဒီမှာ
ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအီးမေးလ်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုစီကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင့်တော်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတုန့်ပြန်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအားထုတ်မှုများကိုအသုံးပြုရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများရပ်စဲပြီးနောက်အဖွဲ့ ၀ င်၏ဆက်သွယ်ရမည့်အချက်အလက်များအားရပ်ဆိုင်းသည့်ဝန်ဆောင်မှု (များ) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆက်သွယ်ရေး (သို့) အဆက်အသွယ်စာရင်းအားလုံးမှဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ဖယ်ရှားခြင်းပြီးဆုံးရန်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလအတွင်းသင့်အနေဖြင့်သင်၏ opt-out မတိုင်မီဖန်တီးထားသောသို့မဟုတ်ပြုစုခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့ထံမှစာများသင်ရရှိနိုင်သည်။
13 ။ links
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည်တတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကြော်ငြာခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်စေမည်သည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမှထောက်ခံခြင်းမပြုကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မူဝါဒများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုသေချာစွာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
သင်အားကျွန်ုပ်တို့မှတင်သွင်းသော (သို့) သင်ပို့ပေးသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့မှစုဆောင်းထားသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှစုဆောင်းထားသည့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံး (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် မှလွဲ၍) နှင့်အသုံးပြုသူ၏ပါဝင်မှုအားလုံးသည်သင်၏လျှို့ဝှက်မဟုတ်သောနှင့်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးများနှင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုခြင်းမတိုင်မီသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသုံးပြုသူပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။
Panel ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လျှောက်ထားခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် Panel ပိုင်ရှင်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ Cint ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လေ့ကျင့်မှုနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သုတေသနပါ ၀ င်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
16 ။ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်
သင်၏စစ်တမ်း၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောစွန့်စားမှုနှင့်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ဥပဒေ၊ ခွင့်ပြုချက်အပြည့်အဝရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့ပိုင်ရှင်များ၊ မိတ်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မြေတိုင်းနေရာ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ သို့မဟုတ်ပါတနာဆိုဒ်များအသုံးပြုခြင်းတို့အပါအ ၀ င်မည်သည့်အာမခံချက်၊ မပြတ်မတောက်သို့မဟုတ်အမှားအခမဲ့ဖြစ်။ ဥပဒေ၊ ခွင့်ပြုချက်အပြည့်အဝရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့ပိုင်ရှင်များ၊ မိတ်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မည်သည့်အချက်အလက်များ၏တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောစစ်တမ်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မြေတိုင်းလေ့လာရေးဆိုဒ်မှတဆင့်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အာမခံချက်၊ ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆိုဒ်သို့မဟုတ်ပါတနာဆိုဒ်။
17 ။ တာဝန်ဝတ္တရားများကန့်သတ်
သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့သည်၊ ပိုင်ရှင်များ၊ စောင်ရေပိုင်ရှင်များ၊ သို့မဟုတ်ပါတနာများ၊ တတိယပါ ၀ င်သူများ၊ OR ဒါရိုက်တာများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ စာချုပ်များ၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ စစ်တမ်း၊ панနယ်မြေ၊ ပါတနာ ၀ က်ဆိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်တင်သွင်းမှုမဆို၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ အထူးသီးသန့်၊ အဆက်အသွယ်၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ မျှော်လင့်ထားသည့်ကယ်တင်ခြင်းများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုးကျိုးများမည်မျှပင်ရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အလားအလာရှိပါသလဲသို့မဟုတ်အလားအလာရှိသူများအားအကြံဥာဏ်ပေးသည်။
တာဝန်ဝတ္တရားများ၏ကန့်သတ်ချက်နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များရှိမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်သည်စာချုပ်၊ အာမခံ၊ ရာဇ ၀ တ်မှု၊ ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှု၊ တင်းကျပ်သောတာ ၀ န်ခံမှု၊ ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်အခြားကျူးလွန်မှုစသည်တို့ကိုအရေးယူခြင်းပုံစံနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲအကျုံးဝင်သည်။ ကန်ထရိုက်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်သီးသန့်ဆေးတစ်လက်၏ပျက်ကွက်မှု။
18 ။ Indemnification
ကျွန်ုပ်တို့အားစစ်တမ်းပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့ပိုင်ရှင်များနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ တရား ၀ င်အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ တာ ၀ န်ခံမှုနှင့်မဆိုဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကိုသင်၏စည်းကမ်းချက်များအားချိုးဖောက်ခြင်းမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောထိုကဲ့သို့သောသဘောသဘာဝပြောင်းလဲမှုများမတိုင်မီသင့်သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများအတွက်သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၌ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်၏ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းလက်ခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်သည်စစ်တမ်းတစ်ခုအားတုံ့ပြန်သည့်အခါ၊ အခြားသုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါသက်ဆိုင်သောဥပဒေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာသင့်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
၂၁။ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း
အခြားရနိုင်သောအခြားကုစားမှုများအပြင်ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည့်ကုစားနည်းများအပြင်သင်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ပါကသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်တွင်သင်၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောနည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လက်မခံနိုင်သော၊ စစ်တမ်းပိုင်ရှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင့်အခွင့်အရေးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်ကိုရပ်စဲလိုက်လျှင် (က) သင်ရပ်စဲပြီးနောက်အကျိုးသက်ရောက်သောအခွင့်အရေးများ၊ ခေါင်းစဉ်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့် / သို့မဟုတ်မ ၀ င်သောဆုလာဘ်များ၊ မက်လုံးများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုများအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသည်။ ; (ခ) သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့ကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ (ဂ) ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ()) ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ပေးသောအနာဂတ်စစ်တမ်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ Panel အသင်း ၀ င်အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည် - (က) သင်ကတက်ကြွသောအဖွဲ့ ၀ င်မဟုတ်သေးလျှင်၊ (ခ) သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တုန်လှုပ်သွားခြင်းသို့မဟုတ်ပေးပို့ခြင်းပျက်ကွက်ခြင်းအကြောင်းကြားစာရရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် (ဂ) ကျွန်ုပ်တို့က“ မေးလ်အပြည့်အဝ” ပြန်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏အီးမေးလ်အကောင့်တွင်သုံးကြိမ် (၃) ကြိမ်လက်ခံရရှိပါက။
သင့်၏ရပ်တန့်ခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှရပ်စဲခြင်းခံရလျှင်သင်ရရှိသောမက်လုံးကိုသင်ဆုံးရှုံးသည်။
22. Severability နှင့်တာဝန်
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုဤစည်းကမ်းချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များသို့မဟုတ်စည်းကမ်းချက်များကိုပျက်ပြယ်သို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်ဟုယူဆပါကဤဝေါဟာရသို့မဟုတ်ပြဌာန်းချက်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များမှခွဲခြား။ ရနိုင်ပြီးကျန်သတ်မှတ်ချက်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပြီးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည် အဆိုပါအတည်မပြုနိုင်အသုံးအနှုန်းမှရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အဆီးအတားခံရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားမျှပေးမည်ဟုသင်သဘောတူသည်။
၂၃။ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဥပဒေရေးရာနေရာ
တရားဝင်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများအပါအဝင်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုစတော့ဟုမ်းခရိုင်တရားရုံး (Sw ။ Stockholms tingsrätt) သို့လွှဲပြောင်းပြီးဆွီဒင်၏ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများအားအသုံးချခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမည့်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများ (ဆွီဒင်သို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိ) နှင့်စပ်လျဉ်း။ ။
Cint သုတေသနပါဝင်သူ privacy ကိုသတိပြုပါ
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်တွင် Cint AB (“ Cint”) သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းအားဖြင့်) မည်သို့အသုံးပြုသည် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များသို့မဟုတ်“ PII”) အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်သော“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ” နှင့်မည်သို့အသုံးချသည်ကိုသတ်မှတ်သည်။ ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များသည်သင်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှပိုင်ရှင် (“ Panel ပိုင်ရှင်များ”) မှပိုင်ဆိုင်သောအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်“ ပါ ၀ င်သူ”) ၏အဖွဲ့ ၀ င်ဟုတ်မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူရန်သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး (“ Clients”) သို့မဟုတ် Partners (“ Partners”) ၏အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်။ သင်၏ပါ ၀ င်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသိပေးချက်ဖြင့်လည်းအုပ်ချုပ်နိုင်သည်။
Cint သည် EU တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြင့်မားသောစံနှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသော GDPR သည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ပါအချက်အလက်များကိုဥရောပသမဂ္ဂအထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်း (GDPR) ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သို့သော်သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ အခြားသီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများသည်လည်းအကျုံးဝင်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုသတိပေးချက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံတိုင်းမှနေထိုင်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သတိပေးချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Cint သည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဘယ်သူက CINT လဲ။
စားသုံးသူထင်မြင်ချက်များနှင့်အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်အတွက် Cint သည် Panel ပိုင်ရှင်များအားစျေးကွက်သုတေသီများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်သုတေသနပြုသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းသုတေသနနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပလက်ဖောင်းကိုပေးသည်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်းတွင်အခြေစိုက်သည်။ Cint သည်ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့်အာရှပစိဖိတ်ရှိမြို့ကြီးများတွင်ရုံးများရှိသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် Cint ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်စျေးကွက်သုတေသနတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များထဲမှအဖွဲ့ ၀ င်မှဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူများအားစစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်ကိုပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှတစ်ဆင့်ပါ ၀ င်သည်။ အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်ဆုများနှင့်မက်လုံးများကိုလက်ခံရန်နှင့်ရွေးရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ပါ ၀ င်သူများအားစစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များကိုညွှန်ကြားသည့် Cint's Panel ပိုင်ရှင်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ Data Data များအားအသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ပေးသော Data Controllers ဖြစ်သည်။ Data Controller ၏တောင်းဆိုချက်အရ Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Data Processer အဖြစ်သာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများနှင့်အတူအောက်တွင်ရှင်းပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းစစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုချင်ပါက၊ "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ panel ပိုင်ရှင်များမှပိုင်ဆိုင်သော panel တစ်ခုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းသည် Cint ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အကျုံးဝင်သည်။ သင် Cint ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ရှာနိုင်သည် ဒီမှာ.
သင်၏စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်သင်၏ပါ ၀ င်မှုသည်လုံးဝဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint ၏အသုံးပြုမှုကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ စစ်တမ်းများနှင့် Cint ၏ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများကအုပ်ချုပ်သောအခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များနှင့်ထိုစစ်တမ်းများနှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များသည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန် Cint သည်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ Cint သည်၎င်း၏ privacy အလေ့အထကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်နာရန်စျေးကွက်နှင့်ထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းသုတေသနအသင်းအဖွဲ့များ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။www.esomar.org ဖြစ်သည်) နှင့် Insights အသင်း (www.insightsassociation.org).
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တရားမျှတ။ တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်အမြဲတမ်းကောက်ယူလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များထဲမှအဖွဲ့ ၀ င်တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ စစ်တမ်းတစ်ခုပြီးမြောက်ခြင်း၊ အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ "ဘာသတင်းအချက်အလက်ကိုအလိုအလျောက်နည်းပညာများဖြင့်စုဆောင်းထားတာလဲ။ " အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်း။
ဆောင်ရွက်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတွင်သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင်သည် Cint သို့မိမိဆန္ဒအလျောက်ပေးသည့်အခါ Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်စုဆောင်းနိုင်သည်။ Cint သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံများ၊ သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့်စျေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီများမှကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များထဲမှအဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်များအတွက် Cint သည်၎င်းတို့၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီအချက်အလက်များကိုကောက်ယူလိမ့်မည်။
Cint သည်ဒေတာဘေ့စ်ပိုင်ရှင်များထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်းရယူနိုင်သည်။ သူတို့၏ဒေတာဘေ့စ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်သဘောတူပြီးသူတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမျှဝေသုံးစွဲသူများသာပါဝင်သည် နောက်ဆုံးတွင် Cint သည်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်ကဲ့သို့အများပြည်သူရရှိနိုင်သောရင်းမြစ်များမှရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
အချိန်နှင့်အမျှ Cint သည်သင်နေထိုင်သောတိုင်းပြည်၊ လူမျိုးရေးသို့မဟုတ်လူမျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံရေးအမြင်များနှင့်ဘာသာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများတို့ပါဝင်နိုင်သည့်အထိခိုက်မခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကောက်ယူနိုင်သည်။ Cint သည်သင်၏အရေးကြီးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကောက်ယူပါက Cint သည်သင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသဘောတူညီချက်ကိုအမြဲတမ်းရရှိလိမ့်မည်။
ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် / သို့မဟုတ်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအလားတူသို့မဟုတ်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်ပါဝင်သည့်အရာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ခြင်း၊ တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ အသံ၊ ဗွီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်သင် မှလွဲ၍ မည်သူမဆို၏သွင်ပြင်မပါဝင်သင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များထဲမှအဖွဲ့တစ်ခုတွင်သင်၏ပါဝင်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။
တိကျသောစစ်တမ်းများနှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များကို Cint ကပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ်မှတ်ထားနိုင်စေရန်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ။
စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားရန်သင့်အားဆက်သွယ်ရန်;
အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏တရား ၀ င်ခွင့်ပြုထားသောသတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုမှုများကို (သို့) ဥပဒေအရလိုအပ်သည်များကိုတုံ့ပြန်ရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုရောင်းချခြင်း၊ တာ ၀ န်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Cint သည်စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအားထုတ်မှုများကိုဤသီးသန့်သတိပေးချက်နှင့်အညီကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆက်ဆံရန်သဘောတူကြောင်းသေချာစေရန်စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်မည်။ ဒါမှမဟုတ်
အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများ (သို့) အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်သင်၏ပါဝင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ စစ်တမ်းများ (သို့) အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များမှပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဤအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်း Cint ကအမြဲတမ်းသေချာစေသည်။ Cint သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သို့သော်အကန့်အသတ်ရှိသောအခြေအနေများတွင် Cint သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ပြဌာန်းထားသောအခြေအနေကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint အားခွင့်ပြုခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းဖြင့်ပြcondition္ဌာန်းထားသောအခြေအနေသည်သက်ဆိုင်ပါက၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint သည်ဆက်လက်ရပ်တန့်သွားမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဥပမာစီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများ၏မိတ္တူများကိုအနည်းဆုံးခုနစ်နှစ်ထိန်းသိမ်းထားရန်။
Cint သည်အချို့သောအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ထိုအချက်အလက်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်တွင်သင်၏စက်ကိရိယာနှင့်စက်စွမ်းဆောင်ရည်များအကြောင်း၊ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲစက်ကိရိယာလည်ပတ်မှုစနစ်၊ သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများ၊ cookie အချက်အလက်၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ စက်ကွန်ယက်ပံ့ပိုးသူ၊ ကွန်ယက်အခြေအနေ၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ ဘရောက်ဇာအမှတ်အသား၊ ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ဥပမာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာအတွက် Identifiers)၊ ကွန်ယက်ပံ့ပိုးသူအသုံးပြုသူ ID (သင်၏ကွန်ယက်ပံ့ပိုးသူကသင့်အားထူးခြားစွာခွဲဝေပေးထားသောနံပါတ်)၊ မီဒီယာဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးလိပ်စာ၊ မိုဘိုင်းကြော်ငြာ သင်၏စက်ကိရိယာကိုထူးခြားစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ တည်နေရာနှင့်အခြားအချက်အလက်များ။ သီးခြားနည်းပညာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကွတ်ကီးသည်အသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သောအသုံးပြုသူကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ပေါ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှတင်ထားသောစာဖိုင်ငယ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရန်နှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်လိမ်လည်မှုမှကာကွယ်ရန်အတွက် Cint သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်တွင် cookies များကိုနေရာချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့မဟုတ်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန် Cint သည် cookies, tags နှင့် scripts များကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ Cint သည်သင်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏သုတေသန ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အတွက်အကဲဖြတ်ရာတွင်ကူညီရန်လုပ်ဆောင်နေသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးနှင့်သင်မြင်၊ သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ Cint သည်စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်အတွက်သင့်အားရွေးချယ်နိုင်သည်။ စစ်တမ်းမတိုင်မီကွတ်ကီးများကသင့်အားသီးခြားကြော်ငြာခြင်းသို့မဟုတ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသီးခြားကြော်ငြာခြင်းသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းများ၏အကဲဖြတ်မှုအတွက်စျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်အတွက်သင့်အားဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်အတွက်လည်းသင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်အရ Cint ၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် cookies များကိုနေရာချပြီးသင်၏အချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်ထို cookies များ၊ tags များနှင့် script များကိုသုံးနိုင်သည်။ Cint ၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်သုတေသနလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိပါကသင်သည် cookies များကိုသဘောတူခွင့်မပြုရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၏ privacy settings များကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်များမှထွက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ cookies များကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ cookies များကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်၏ browser ကိုလည်း configure လုပ်နိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မပေးခြင်း၊ cookies များကိုဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင့်အားစစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ cookies များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအတွက်ခေါင်းစဉ်ရှိသောအပိုင်းကိုကြည့်ပါ ငါဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
Cint သည် cookies များကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။
Cint အသုံးပြုသော cookies အကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
မိုဘိုင်းကြော်ငြာအမှတ်အသားဆိုသည်မှာစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုစီကိုဖော်ပြသောနံပါတ်များနှင့်အက္ခရာများဖြစ်သည်။ iOS တွင်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအမှတ်အသားကို“ ကြော်ငြာသူများအတွက်အထောက်အထား” (IDFA သို့မဟုတ် IFA အတိုချုပ်) ဟုခေါ်သည်။ Android တွင်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအမှတ်အသားမှာ GPS ADID (သို့မဟုတ် Android အတွက် Google Play Services ID) ဖြစ်သည်။ Cint သည်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအထောက်အထားများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ် ၄ င်းကို Partner မှရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်သို့မဟုတ် Cint သည်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုမျှဝေရန် Cint သည်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအမှတ်အသားကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ Cint သည်စစ်တမ်းသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်အတွက်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုတွင်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအမှတ်အသားသည်စစ်တမ်းမတိုင်မီသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မှီသို့မဟုတ်ထိုသီးခြားကြော်ငြာကိုအကဲဖြတ်ရန်သင့်အတွက်တိကျသောကြော်ငြာသို့မဟုတ်မြှင့်တင်မှုများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ ပရိုမိုးရှင်းများ။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Cint သည်မိုဘိုင်းကြော်ငြာအထောက်အထားများကိုသာစုဆောင်းရယူနိုင်သည်။
Web Beacons များ:
web tag တစ်ခု (tag၊ clear gif သို့မဟုတ် 1 × 1 pixel ဟုလည်းလူသိများ) သည် web page သို့မဟုတ်အီးမေးလ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော code သေးငယ်သည့် string တစ်ခုပါဝင်သည်။ ၄ င်းတို့သည် web beacon နှင့်သက်ဆိုင်သောမြင်နိုင်သောဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ မကြာခဏပုံရိပ်ကိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်နောက်ခံတွင်ရောစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာသားများဖွင့်လှစ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ပါဝင်သူတစ် ဦး မှကြော်ငြာများသို့မဟုတ် Cint တိုင်းတာသောအခြားအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အီးမေးလ်အတွင်းရှိ link များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများ (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ၌ကလစ်တစ်စုံတစ်ရာနှိပ်ခြင်းအားအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများမှဝက်ဘ်လှုပ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ။ Cint နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည် Personal Data ကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်သုတေသနအတွက် web beacons များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ပထဝီ - တည်နေရာဒေတာ:
Cint သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်မှ geo-location အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ Cint သည်သင်၏ geo-location အချက်အလက်များကိုလိမ်လည်မှုကာကွယ်ခြင်းအတွက်သို့မဟုတ်စျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ကြော်ငြာသုတေသနသို့မဟုတ်အခြားခြေရာခံခြင်းအခြေပြုစျေးကွက်သုတေသနလှုပ်ရှားမှုများအပါအ ၀ င်။ အကယ်၍ Cint သည်သင်၏ပထဝီအနေအထားအချက်အလက်ကိုစုဆောင်းလျှင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုပါက Cint သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
သင်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းရန် Cint သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ဗွေနည်းပညာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်တွင် IP လိပ်စာကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ် (သို့) ဘရောင်ဇာဗားရှင်းနံပါတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သောအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်သည်။ ဤနည်းပညာသည်လိမ်လည်မှုကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပါ ၀ င်မှုကိုကန့်သတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်ထူးခြားသောကွန်ပျူတာအမှတ်အသားတစ်ခုဖန်တီးသည်။
လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်စစ်တမ်းများနှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သင်သည်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအကောင့်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောပရိုဖိုင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
Files တွေကို log:
စစ်တမ်းနှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်နေစဉ်အတွင်းအချို့သောအချက်အလက်များကို Cint သည်အလိုအလျောက်စုဆောင်းသိုလှောင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့သင်လည်ပတ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာပို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများကအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်သည် ဤဆာဗာမှတ်တမ်းများတွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်တောင်းဆိုမှု၊ အင်တာနက်ပရိုတိုကော (အိုင်ပီ) လိပ်စာ၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ ဘရောင်ဇာဘာသာစကား၊ သင်တောင်းဆိုသည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်နှင့်သင့်ဘရောက်ဇာကိုထူးခြားစွာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောကွတ်ကီးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတို့ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖျက်ပစ်ခြင်းခံရသည်။
သတင်းအချက်အလက် Cint တတိယပါတီများထံမှစုဆောင်း:
Cint သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ အမူအကျင့်နှင့် / သို့မဟုတ်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများမှရယူနိုင်သည်။ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများ၊ ကြော်ငြာကွန်ယက်များ၊ သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနများ၊ အခြားစျေးကွက်သုတေသနပံ့ပိုးသူများနှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။ Cint သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အပြုအမူဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်လူတ ဦး ချင်းစီ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အချက်အလက်များအတည်ပြုခြင်း၊ အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို CINT ကမည်သူနှင့်မည်သူ့ကိုဆက်သွယ်မည်နည်း။
နောက်ထပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဒေအရမလိုအပ်ပါက Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့လက်လှမ်းမီအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပါဝင်ပါက Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာမျှဝေလိမ့်မည်။ စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်းပုံစံအတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကလူ ဦး ရေအကြားရှိသီးခြားအုပ်စုများသို့မဟုတ်ပရိသတ်များအကြားခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ဦး စားပေးများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်စျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုပြီးသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာအသုံးပြုမည်။
Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အချက်အလက်အချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားသုတေသနအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြနိုင်သည် -
စျေးကွက်သုတေသနဝန်ဆောင်မှုများ (ကျွန်ုပ်တို့၏မက်လုံးများအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ သို့သော်ထိုသို့သောပါတီများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုတားမြစ်သည်။
ဤတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသည် Cint အတွက်လုပ်ဆောင်သောသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ် Cint ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ။ ဤအေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် Cint အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ဥပမာ၊ Cint သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလက်ခံရန်၊ သင်စုဆောင်းရန်သို့မဟုတ်သင်တောင်းခံထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်အတွက်သို့မဟုတ်၊ သင်တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကငါတို့အတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့အလုပ်အတွက်၊
Clint of Clients များအကြား၊ သို့သော်ဤအမှုများတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို Clients များနှင့်သာမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။
i) သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (၂) Insights Association နှင့် ESOMAR ၏ကျင့်ထုံးများနှင့်အညီခွင့်ပြုထားသောသုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
အများပြည်သူအာဏာပိုင်များ၏တရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများကိုတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါကအမျိုးသားလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်၊
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းသည်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သည်ဟု Cint ကယုံကြည်သောအခါ;
ရောင်းချခြင်း၊ တာ ၀ န်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြား Cint လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Cint သည်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်နှင့်အညီကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသဘောတူရန်သဘောတူရန်ထိုကဲ့သို့သော ၀ ယ်သူအားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ Cint ကိုရောင်းချခြင်း၊ တာ ၀ န်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ခုသည်အလားအလာရှိသည့် ၀ ယ်သူနှင့်မပြီးပါကတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဖော်ပြရန်နှင့်ထပ်မံဖျက်ပစ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်
Cint သည်အချို့သောကန့်သတ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (ဥပမာ - ပွဲစားများ၊ ဒေတာစုစည်းခြင်းစသည်) ကိုစျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုင်စင်ချပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲတစ် ဦး ချင်းအဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်စုပေါင်းအဆင့်ဒေတာ (ဥပမာထုတ်ကုန်) အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်လည်ပတ်မှုအချက်အလက်များ၊ အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းစသဖြင့်) ပရိသတ်များထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ပုံစံတူပုံစံများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်၊ ဤအချက်အလက်များကိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ဖောက်သည်များအားရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထောက်လှမ်းရေးပေး၏။ ဤအချက်အလက်များကို cookie (cookie ID)၊ မိုဘိုင်းကြော်ငြာနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။ အသွင်အပြင်တူသောမော်ဒယ်သို့မဟုတ်စုစည်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ၊ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ အလိုအလျောက်နည်းလမ်းဖြင့်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လိမ်လည်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သူများအတွက်ဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ဒေတာဘေ့စ်ကိုက်ညီခြင်း၊ အချက်အလက်အတည်ပြုခြင်း၊ အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊
သင်၏တောင်းဆိုမှုများနှင့် / သို့မဟုတ် Cint ၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Cint သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သို့မဟုတ်စက်၏သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Cint သည်မည်သည့်ဆန္ဒနှင့်မကိုက်ညီသည်ကိုသေချာစေရန်ရွေးချယ်ထားသောပါဝင်သူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆိုသိမ်းဆည်းခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီပြုလုပ်သည်။
မိဘများသဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးသူငယ်များထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint သည်သိလျက်မစုဆောင်းပါ။ အကယ်၍ Cint သည် Cint သည်မိဘ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးတစ် ဦး မှအမှတ်တမဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမတော်တဆကောက်ယူကြောင်းသတိပြုမိပါက Cint သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်မှထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် Cint သည် Cint မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောနည်းပညာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်များထားရှိပေးခဲ့သည်။ သင်၏တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရန်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်လိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများသာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Cint မှအကာအကွယ်ပေးမှုများရှိသော်လည်းအင်တာနက်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ယက်မှထုတ်လွှင့်မှုများသည်လုံးဝမလုံခြုံပါ။ Cint သည်အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မှုများ၏လုံခြုံရေးကိုအာမခံချက်မရှိပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint သို့တင်ပြရာတွင်တစ် ဦး ချင်းအမှားအယွင်းများအတွက် Cint သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။
Cint သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလိုအပ်သည့်အချိန်ထက် ပိုမို၍ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်သင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဤအချိန်ကာလသည် Cint နှင့်သင်တို့၏ Panel Panel ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ပါတနာ၏စာချုပ်အရကတိများ၊ သက်ဆိုင်သောကန့်သတ်ထားသောကာလများ (တောင်းဆိုမှုများကိုယူဆောင်လာရန်) သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအရလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအောက်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြင်ဆင်၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အထူးသ:
၀ င်ခွင့်အခွင့်အရေး - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ပြင်ဆင်ခွင့် - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျမှန်ကန်မှုမရှိစေရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်
ဖျက်ပစ်ပိုင်ခွင့် - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (အကယ်၍ သင်ကခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလျှင်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအရသင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုသာကန့်သတ်ထားသည်)
ဒေတာများလုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ပိုင်ခွင့် - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားသင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် (သင်၏တောင်းဆိုမှုအားလေးစားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း၌သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Cint မှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်) ။
ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်မှုအခွင့်အရေး - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားပါတီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အတွက်ထောက်ပံ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်း။
တစ် ဦး ချင်းထံမှတောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် Cint သည်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရက် ၃၀ အတွင်းပေးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင်သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုလိုလျှင် Cint သည်ရက် ၃၀ အတွင်းသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင် Cint သည်အချို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမီနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီအချိန်မှာပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်။
အကယ်၍ Cint သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုရယူရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုငြင်းပယ်ပါက Cint သည်ငြင်းဆန်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုလူတစ်ယောက်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
စစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်၊ မည်သည့်တိကျသောစစ်တမ်းမေးခွန်းကိုမဆိုတုံ့ပြန်ရန် (သို့) ထိခိုက်လွယ်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အပါအ ၀ င်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအမြဲတမ်းလေးစားပါလိမ့်မည်။
သီးခြားစစ်တမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိ၊ မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေဆိုရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်ပါ ၀ င်မှုကိုရပ်ဆိုင်းမည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သီးခြားစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခြင်းကသင့်အားမက်လုံးပေးသောလျော်ကြေးသို့မဟုတ်အနာဂတ်သုတေသနလေ့လာမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ မက်လုံးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ Cint ၏စည်းကမ်းချက်များကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Panel ပိုင်ရှင်များထဲမှအဖွဲ့ ၀ င်များသည်စစ်တမ်းများ၊ အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ် cookies များအပါအ ၀ င်အလိုအလျောက်နည်းပညာများသို့မဟုတ်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမပြုလုပ်လိုတော့သည့်အတွက်သီးသန့်လုံခြုံရေးချိန်ညှိချက်များစာမျက်နှာသို့သွားရောက်ခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာနိုင်သည်။ သငျသညျပိုင် panel ကများအတွက်အဖွဲ့ဝင်ပေါ်တယ်၏။ သီးသန့်လုံခြုံရေးချိန်ညှိချက်များစာမျက်နှာကိုစစ်တမ်းဖိတ်ကြားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ထွက်ပေါက်လင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ပါဝင်သူများသည်အောက်ဖော်ပြပါ“ CONTACT US” အပိုင်းရှိဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Cint သည်ဒေတာများကိုဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ (EEA) တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် Cint နှင့်ဆက်နွယ်သောကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်မသက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုသင်၏မူလနိုင်ငံပြင်ပမှစုဆောင်း၊ ပြုပြင်၊ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
EU နှင့် EEA ပြင်ပရှိ Cint ၏တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဥရောပကော်မရှင်မှချမှတ်ထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဝါကျများကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီအတွင်းဒေတာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေးစားရန်နှင့်ဥရောပဒေတာကာကွယ်မှုဥပဒေများနှင့်အညီဥရောပကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအဖွဲ့များကိုလိုအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အခြားစီးပွားရေးပံ့ပိုးသူများနှင့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များရှိသည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများအရ Cint သည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရှိနိုင်ငံသားများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သာနောက်ပိုင်းတွင်ထိုအချက်အလက်များကိုအီးယူ (သို့) EEA သို့လွှဲပြောင်းသည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုသတိပေးချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများနှင့်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီးအခြားထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များသည် Cint ယုံကြည်သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် Cint ဖော်ပြသည့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ လုံခြုံမှု၊ ဒေတာစုဆောင်းမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့် site တစ်ခုစီ၏ privacy သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်မူဝါဒများကိုသေချာစွာဖတ်ရန် Cint ကအကြံပြုသည်။ မည်သည့် Privacy Notice ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်၊ အသုံးပြုရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့်ထုတ်ဖော်ရန်အတွက်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလွတ်လပ်စွာအထူးသီးသန့်ပေးသည်။ လက်ရှိလုံခြုံရေးသတိပေးချက်။
Cint သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်သုတေသနအစီအစဉ်များမှထွက်ခွာလိုပါကသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Luntmakargatan ၁၈၊ ၁tr
111 37 စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် Pollfish ဝဘ် plugin ကိုအသုံးပြုသည်။ Pollfish သည်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သူမဆိုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်သည်။ Pollfish သည်ထိုကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုသူများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများကိုလိပ်စာပေးရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များတီထွင်သူများနှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Pollfish cookies များကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါအသုံးပြုသူသည်စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိ / မရှိကို Pollfish ကစစ်ဆေးသည်။ Pollfish မှစုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်များသည် Pollfish မှအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအသုံးပြုသူများအားဤမေးခွန်းများကိုပေးပို့သည့်အခါတိုင်းမေးခွန်းပုံစံများအားသင်၏အဖြေများနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မည်။ Pollfish မှဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ရရှိသောအချက်အလက်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ https://www.pollfish.com/terms/respondent တွင်ကြည့်ရှု။ Pollfish တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်များကိုသေချာဖတ်ပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းကိုလက်ခံပြီးသင်၏စနစ်တွင် Pollfish cookie တစ်ခုကိုနေရာချထားရန်နှင့်အထက်ပါအချက်အလက်များကို Pollfish မှလုပ်ဆောင်ရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် Pollfish ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ“ ဖယ်ထုတ်ခြင်းကဏ္ section” ကို သုံး၍ ဖြစ်စေ၊ သင်၏ browser ၏ချိန်ညှိချက်များမှ“ third party cookies” ကိုပိတ်ခြင်းဖြင့် Pollfish စစ်ဆင်ရေးကိုအချိန်မရွေးပိတ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းသင့်ကိုအကြောင်းကြားသည်။ Pollfish ၏လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန်သင်ဆန္ဒရှိပါက Pollfish ၏ဖြေဆိုသူ၏အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကိုစစ်ဆေးရန်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ ဖိတ်ကြားပါသည်။
Apple, GOOGLE နှင့် AMAZON သည်ဤစပွန်ဆာ / ပုံဆွဲနည်းတွင်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမပါဝင်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းထုတ်ကုန်များကိုဆုများအဖြစ်အသုံးမပြုပါ။